Umzekelo Ukusetyenziswa kwe-Linux Yimuphi umyalelo
I-Linux leyo umyalelo usetyenziswa ukufumana indawo yenkqubo. Kule khokelo, siza kukubonisa indlela yokusebenzisa umyalelo onjani kunye nendlela yokufumana ngayo yonke into ngokuchaza zonke iitshintshi ezikhoyo.
Indlela yokufumana Indawo yoNkqubo
Kwiingcamango, zonke iinkqubo kufuneka zigijime kwi-folder ye-usr / bin kodwa ngokwenene, oku akunjalo. Indlela eqinisekileyo yomlilo yokufumana apho iprogram ikhona khona ngokusebenzisa umyalelo owodwa.
Ifom elula kakhulu yomyalelo yile ndlela ilandelayo:
Umzekelo ukufumana indawo ye -browser ye -Firefox isebenzisa umyalelo olandelayo:
Imveliso iya kuba yinto enje:
Ungacacisa iinkqubo ezininzi kumyalelo ofanayo. Umzekelo:
apho firefox gimp banshee
Oku kuza kubuya iziphumo ezilandelayo:
/ usr / bin / firefox / usr / bin / gimp / usr / bin / banshee
Ezinye iinkqubo zifumaneka kwifolda engaphezu kweyodwa. Ngokungagqibekanga kodwa oko kuya kubonisa kuphela.
Umzekelo, sebenzisa umyalelo olandelayo:
Oku kuza kufumana indawo yomyalelo ongaphantsi kwaye umphumo uza kuba ngolu hlobo:
/ usr / bin / ngaphantsi
Oku akubonisi imifanekiso yonke kodwa nangona kuba umyalelo ongaphantsi ufumaneka kwindawo engaphezu kweyodwa.
Unokufumana umyalelo owowuphi ukubonisa zonke iindawo ezifakwe kwinkqubo usebenzisa olu tshintsho olulandelayo:
Unokugijima oku ngokumelene nomyalelo ongaphantsi ngolu hlobo:
Isiphumo esivela kumyalelo ongentla siya kuba ngale ndlela:
/ usr / bin / ngaphantsi / bin / ngaphantsi
Ngaba oko kuthetha ukuba ngaphantsi kufakwe kwiindawo ezimbini? Ewe hayi.
ls -lt / usr / bin / ngaphantsi
Ekupheleni kwesiphumo uza kubona oku kulandelayo:
/ usr / bin / ngaphantsi -> / bin / ngaphantsi
Xa ubona i -> ekupheleni komyalelo we-ls uyazi ukuba ikhonkco lokumfuziselo kwaye libonisa nje indawo kwindawo yokwenene.
Ngoku ugijime lo myalelo olandelayo:
ls -lt / bin / ngaphantsi
Ngeli xesha umphumo ekupheleni komgca ulandelayo nje:
/ bin / ngaphantsi
Oku kuthetha ukuba le nkqubo yinyani.
Ngoko mhlawumbi mhlawumbi kuyamangalisa ukuba yintoni umyalelo wokuphuma / usr / bin / ngaphantsi xa ucinga umyalelo omncinane.
Umyalelo esiwufumana uncedo kunokuba yiyiphi umyalelo apho oku kungasetyenziselwa ukufumana i-binaries yeprogram, ikhowudi yomthombo weprogram kunye namaphepha encwadana kule nkqubo.
Kutheni ungayisebenzisa loo myalelo?
Cinga ukuba uyazi ukuba inkqubo ifakwe kodwa ngenxa yezizathu ezithile, ayiyi kusebenza. Kunokwenzeka ukuba yinto yokuba ifolda inkqubo ifakwe kuyo ayikho endleleni.
Ngokusebenzisa umyalelo ongayifumana apho uphuhliso lwenkqubo kwaye mhlawumbi uhamba kwiifolda inkqubo ukuyiqhuba okanye ukongeza indlela eya kwinkqubo yomyalelo.
Ezinye izixhobo zokukhangela ezisebenzayo
Nangona ufunda malunga noluphi umyalelo kubalulekile ukuba uqaphele kukho enye imiyalelo efanelekileyo ekufumaneni iifayile.
Ungasebenzisa umyalelo wokufumana ukufumana iifayile kwifayile yakho yefayile okanye mhlawumbi ungasebenzisa umyalelo wokufumana.
IiLinux Imiyalelo ebalulekileyo
Izabelo zeLinux zanamhlanje zenze imfuneko yokusebenzisa i-terminal engaphantsi kwengxaki kodwa kukho imigaqo ethile ofuna ukuyazi.
Esi sikhokelo sibonelela uluhlu lwemithetho ebalulekileyo efunekayo yokuhamba kwindlela yakho yefayili.
Ukusebenzisa isikhokelo uza kukwazi ukufumana ifolda ekhoyo, indlela yokuhamba kwiifolda ezahlukileyo, uluhlu lweefayili kwifolda, buyela kwifolda yakho yasekhaya, yenze ifolda entsha, wenze iifayili, qamba kwakhona kwaye uhambise ifayile uze ukope iifayile.
Uyakufumana kwakhona indlela yokucima iifayile kunye nokufumana ukuba zeziphi izixhumanisi kunye nendlela ozozisebenzisa ngayo, kubandakanywa ukucacisa umahluko phakathi kwezixhumanisi ezinzima kunye nezichukumisayo.
Lokugqibela - uLinux Command - Unix Command
Indlela yokuqhathanisa ezimbini Iifayile zeeFayile usebenzisa iLuxux
Umzekelo usebenzisa umyalelo "ps"
Konke Okufuneka Ukwazi NgoMyalelo Omkhulu
Funda i-Linux Command - iwpriv
I-atd - Linux Command - Unix Command
Indlela yokufumana iMigaqo yeLinux kunye neNkqubo ngokusebenzisa i-Whereis
I-Linux / Unix Command Lindela
Rpm - I-Linux Command - Unix Command
Indlela yokufumana iiNgcaciso eziPhambili zeNtsebenzo yakho yeStereo
Yintoni iFTP kwaye Ndingayisebenzisa njani?
Indlela yokufikelela kwi-Yahoo! yamahhala! I-akhawunti yeAkhawunti isebenzisa iiYPOP!
Indlela yokujongana ne-Virtual Sector Boot
Yintoni i-Xbox yasekuqaleni?
Kutheni Uza Kudala Udale I-Internet Meme?
Indlela i-Apple iguqulwe ngayo uMculo kunye neBomi bethu
Indlela yokucoca i-Flat Screen ye-TV
Yintoni iFayile ye-EXE?
Indlela yokudala i-ID ye-Apple kuMntwana kwiiNtshukumo ezi-4
Iingcebiso ezintlanu zokuSebenza zokuBambisana kweQela kwi-Office 365
Isingeniso kwi-Samba ye-Computer Networks
Ubungozi obubandakanyekayo kwi-Cloud Computing
Iifayile eziphambili ze-NFL ze-iPad
Iingcebiso zokukhetha iNcwadi yoBulungisa yeWebhu
IiWebhsayithi ezininzi ezithandwayo
INzululwazi yeZithuthi zeBattery Technology
Ukuphononongwa kweGoogle Maps ye-iPhone
I-Guitar Hero Workout